Akhiriso Korneyl Ugandeys Ah oo Yiri: “Soomaalida Waa Sidii Doofaarka oo Kale”. – Shabakadda Amiirnuur
Akhiriso Korneyl Ugandeys Ah oo Yiri: “Soomaalida Waa Sidii Doofaarka oo Kale”.
August 8, 2018 12:18 pm by admin Views: 58
Qormo dheer oo uu baahiyay wargeyska Foreign Policy ayaa waxaa si aad ah loogu bah dilay ummada Soomaaliyeed iyo askarta dowladda federalka ah ee shisheeyaha ku daaban.
Shisheeyaha ayaa dhaqaale badan ku bixiya sidii loo tababari lahaa askar aan tayo lahayn oo loo adeegsado waxa loogu yeero (La dagaalanka Argagixisada) kuwaasoo ku fashilmay xaqiijinta ahdaafta loo dhisay.
Korneyl Uganda u dhashay oo ka mid ah saraakiisha Amisom, ee Soomaaliya jooga ayaa isagoo arrintaas ka hadlaya yiri: “Doofaarka sidiisaba daahir ma noqdo, Soomaaliyana waa sidaas oo kale, waad nadiifineysaa misana waa wasakh”
Korneylkan ma oran askarta dowladda, ee waxa uu doofaarnimada ku xukumay Soomaalida oo dhan oo uu ka dhigay shey la nadiifinayo oo haddana wasaqoobaya, tanina waxay ku tuseysaa marxaladda ay ummadeenu mareyso.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya, ay lamid tahay Afganistaan, waayo wuxuu tibaaxay in Mujaahidiinta Dhaalibaan, ay la wareegeen meel walba oo ay shisheeyuhu banneeyaan.
Wargeyska ayaa sheegay in xaaladda ammaan ay sii xumaaneyso isagoo sheegay in Muqdisho, iyo meelaha u dhow-dhow ay joogto ka noqdeen qaraxyada iyo dagaalada ka dhanka ah dowladda iyo shisheeyaha Amisom.
Korneylka Ugandeyska ah ee uu Wargeysku soo xigtay iyo ilo kale, ayaa waxay muujiyeen niyad jab xooggan oo dhanka ammaanka ah iyo iney ku daaleen dagaalka ay kala kulmayaan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Tani waa mid ka marqaati kacaysa in Mareykanka iyo dalalka ku daaban ay ku khasaareen hantidii ay ku bixiyeen duullaanka Soomaaliya. “Reer Galbeedku waxey tababareen ciidamadii ugu xumaa aduunka waana ciidamada Ciraaq, Afghanistan iyo Soomaaliya” sidaasi waxaa wargeyska Foreign Policy, u sheegay professor Stig Jarle oo xiriirka caalamiga ka dhiga Jaamacada Norwegian University of Life Sciences.
Nin ajnabi ah oo la taliye u ah wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federalka, lana soo shaqeeyay in ka badan labaatan dowladood, islamarkaana magaciisa la qariyay, ayaa sheegay in askarta dowladda loo diyaarin karo hab fiican balse aanan daacad laga ahayn.
Sidoo kale Cabdi Casiis Xildhibaan oo ahaa Afhayeenkii wasaaradda Amniga “DF” oo wareysi siiyay wargeyska ayaa dhankiisa qiray in ay liitaan Sirdoonka dowladda shakina uusan ka qabin in Mujaahidiinta Al-Shabaab, ay dhax gal ku sameeyaan.
“Maalmo ka hor xafiiska taliye ku xigeenka ciidanka NISA waxaa u dhacay askar xiriir la leh Al-Shabaab” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan, laakin kama heyno Al-Shabaab caddeymo arrintan ku saabsan.
Hogendoorn, oo ka tirsan Ururka falanqeeya xasaradaha caalamiga ‘International Crisis Group’ (ICG) ayaa dhankiisa sheegay in waxa loogu yeero (Beesha caalamku) ay daacad ka yihiin dhisidda ciidamada dowladda.
Isku soo wada duuboo qormada Wargeyska oo u muuqata mid eegeysa halka laga heysto ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye, ayaa waxaa lagala soo dhex bixi karayaa natiijo ah in ay sii burbureyso rajada ajaanibtu ka qabeen in awood lagu maquuniyo xoogagga Mujaahidiinta Al-Shabaab.